September 15, 2020 3 min read By wardeeq news Reporter
Amitabh Bachchan oo ah Super Star-ka Bollywood-ka ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee caan ah ee Hindi ah ee codkiisa amaah siiya kaaliyaha dhanka dijitaalka ah ee ‘Amazon’ laga bilaabo sanadka soo socda, maadaama shirkada weyn ee Silicon Valley ay sii ballaarinayso joogitaankeeda suuqa muhiimka ah.
Jilaagan 77 jirka ah wuxuu caan ku ahaa magaca Hindiya muddo ku dhow nus qarni, baritonkiisa qotada dheer isla markiiba waa laga garan karaa dhagaystayaasha waddanka 1.3 bilyan.
Shirkadaha ajaanibta ah sida Amazon waxay tobanaan bilyan oo doollar ku qarash gareeyeen Hindiya sannadihii la soo dhaafay iyagoo u halgamaya qayb ka mid ah dhaqaalaha dijitaalka ah ee sii kordhaya ee Aasiya.
Qoraal ay soo dhigtay barta internetka Isniintii, Amazon India waxay ku sheegtay in muuqaalka “waayo-aragnimada codka” ee Bachchan uu noqon doono mid laga iibsan karo Alexa sanadka soo socda.
“Waxaa ku jiri doona waxyaabo caan ah sida kaftanka, cimilada, shayaariis (gabayo), xigashooyin dhiirrigelin ah, talo iyo waxyaabo kale,” ayay tiri shirkadda.
Alexa markii ugu horeysay ayaa la soo saaray xulashada codka caanka ah sanadkii hore iyada oo la socota jilaa Samuel L Jackson, ka dib tallaabo la mid ah tii Google sanadkii hore, taas oo siisay dadka isticmaala ikhtiyaarka ah inay ku maqlaan heesaha John Legend ee Kaaliyaha Google.
“Waan ku faraxsanahay inaan abuuro waayo-aragnimadan codka ah,” megastar-ka Bollywood-ka ayaa ku yiri barta Amazon.
“Tikniyoolajiyadda codka, waxaan ku dhiseynaa wax aan si wax ku ool ah ula wadaago dhagaystayaashayda iyo dadka wanaaga jecel.”
Markii ugu horeysay ee uu codkiisa ku qoro barta internetka ee ‘2010’, Bachchan Bol-Bachchan Speak, wuxuu u ogolaaday taageerayaasha inay dhagaystaan ​​fariimaha horay loo duubay ee uu xiddiggu riixayo badhanka.
Marka laga soo tago la tartamidda aaladaha codka ku shaqeeya sida Apple ee Siri iyo Kaaliyaha Google ee macaamiisha, Amazon waxay la dagaallameysaa shirkadda Walmart ee Flipkart iyo JioMart, oo uu iska leeyahay ninka ugu taajirsan Aasiya Mukesh Ambani, si ay qayb uga helaan suuqa tafaariiqda ee internetka.
Shirkadan tiknoolajiyadda ah, oo uu iska leeyahay Jeff Bezos, oo ah qofka adduunka ugu taajirsan, ayaa sidoo kale isku dayaysa inuu ku guuleysto kubbadaha indhaha iyadoo adeegsanaysa baahinta barnaamijkeeda ee la tartamaya Netflix iyo Disney + Hotstar.
Bachchan iyo qoyskiisa waxay ka mid ahaayeen bukaanada ugu caansan Hindiya ee loo yaqaan ‘coronavirus buka’.
Super Star-ka, Aktarka uu dhalay ee Abhishek, atariishada ay sodohda u tahay Aishwarya Rai, iyo gabadha ay ayeeyada u tahay Aaradhya ayaa dhamaantood la dhigay cisbitaalka bishii July. Dhamaan afartaba waa la sii daayay.
Xidigtaan ruug cadaaga ah ayaa shaqadeeda ku soo laabatay bishii hore duubista filimka India ee yaa raba inuu noqdo Milyaneer? ka dib markii masuuliyiintu fududeeyeen xakamaynta coronavirus-ka ee filimada iyo TV-ga.
Si kastaba ha noqotee, kiisaska ka socda Hindiya ku dhowaad shan milyan, mas’uuliyiinta Mumbai – guriga Bollywood – waxay weydiisteen guryaha wax soo saarka si loo hubiyo in xarumaha caadiga ah si joogto ah loo nadiifiyo, maaskarada la xirto iyo kala fogaanshaha bulshada “la raaco sida ugu macquulsan”.
Filimkii ugu dambeeyay ee Bachchan, ee majaajillada-riwaayadda ahaa ee Gulabo Sitabo, wuxuu toos u aaday adeegga baahinta ee Amazon bishii Juun, ka dib markii tiyaatarada Hindiya ay xirmeen bishii Maarso sababo la xiriira cabsi baahsan.
Biden, Trump jockey cimilada maadaama dabku kiciyo ololeyaasha